IXABISO LEMARGO: UKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YENTOMBI YOMFAMA OPHAKATHI - IINDABA
Intombi yoMfama waseMidwest
Ixabiso likaMargo yimvumi yelizwe etyikitywe kwiRekhodi yoMntu wesithathu kaJack White. Kwisiqalo sakhe esine-buzz, uvela njengowasetyhini osokola ukubuyisa ibali lakhe kumatshini waseNashville kwaye walibuyisela kwindawo yeetoni ze-honky-tonk zesikolo esidala.
tyler umdali igor iimpawu
Dlala iTrek 'Hurtin' (Kwibhotile) '-Ixabiso leMargoUkuhamba SoundCloud Dlala iTrek 'Izandla zexesha' -Ixabiso leMargoUkuhamba SoundCloud
Ixabiso likaMargo sele ligigitheka nzima eNashville phantse ishumi leminyaka, lifumana igama lesenzo esikhohlakeleyo kodwa singafumani ngqalelo kwiilebheli okanye kwiinkqubo zerediyo. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, nangona kunjalo, ithamsanqa lakhe lathatha ngesiquphe: Wasayina kwiJack White's Third Man Records, eyaqala ' Colbert , 'kwaye ndikhuphe umtya wesiselo esinxilisayo', singles-hard livin 'singles. Ngaphambi kokuba akhulule ukuqala kwakhe, Intombi yoMfama waseMidwest , Uzifumene esembindini wenye yezona zinto zixineneyo kumculo welizwe, oko kuthetha ukuba uye waqwalaselwa kakhulu. Uninzi lwayo luye lwagxininisa kwi-backstory yakhe, evakala ngathi yonke ingoma yelizwe iqengqelwe kwenye: Utata waphulukana nefama, uNashville wamqhekeza, wabopha indoda etshatileyo, wenza isitulo esifutshane entolongweni, waphulukana nomntwana. Ukurekhoda eli cwecwe, waxhoma umsesane wakhe womtshato kunye nemoto ukuhlawulela iiseshoni eMemphis 'eyaziwayo iStudiyo.
Unayo yonke into kwi-epic yakhe yokuqala yemizuzu emithandathu evulekileyo 'Izandla zeXesha,' exelela ibali lakhe ngcono kunaye nawuphi na umgxeki, ukukhutshwa kweendaba, intatheli, umphathi weTV, okanye umbonisi wamabhaso. Kukuvuleka okubandayo okuphawulekayo, intshayelelo engakholelekiyo kumculi ongumntu omtsha kunye negqala, kodwa yintoni eyenza ukuba ibe namandla kakhulu ngumahluko phakathi kwazo zonke izinto ezimbi azinyamezeleyo kunye neenjongo zakhe zokuthoba: 'Into endifuna ukuyenza yenza imali encinci. ' Endaweni yokoyisa umhlaba okanye ukubona igama lakhe phezulu kwizibane, amaxabiso afuna ukubuyisela ifama kutata wakhe kwaye athengele umama ibhotile yewayini.
Vula Intombi yoMfama waseMidwest -Sihloko sakhe ngokucacileyo senzelwe ukuba silingane nodumileyo sikaLoretta Lynn Imvelaphi yebali -Ixabiso liyavela njengowasetyhini osokolayo ukubuyisa ibali lakhe kumatshini waseNashville kwaye ulibeke kwindawo yesikolo esidala i-honky-tonk tunes ezahlula umahluko phakathi kwe-ampersands ezininzi: ilizwe kunye nentshona, irock & roll, isingqisho kunye neblues. Sisiqwengana sokwenza umculo kunye nokubalisa amabali, inebhendi exhasa indlela eyomeleleyo ebizwa ngokuba lixabiso lethegi kunye nemvumi enelizwi eliqhwethayo elihambisa zombini ukuba semngciphekweni kokugada kunye nokungakhathali. Uyadlala ngelixa uNashville etsha 'kule Dolophu ijikeleza,' imizuzu emithathu yangaphakathi ye-baseball enika iinkcukacha kubo bonke abaphathi abanganyanisekanga kunye nabakhuthazi bezesini abagcwalisa eli shishini njengeentakumba. Ndiyacinga ukuba ndim ofumana ihlaya, uyacula. 'Mhlawumbi ndiza kuba nobukrelekrele ukuba bendidlala sisidenge.'
Uninzi lwe Intomba Nangona kunjalo, amaxabiso anzima ngeendlela eziqhelekileyo, kwiingoma ezihambelana ngokuthe kratya nezithethe zelizwe. Usongela umphathi we-bar kwi-honky-tonk ingoma yokulwa ethi `` Malunga nokufumanisa, '' urhola umtyholi egxalabeni lakhe nge-whisky kunye ne-tequila kwi-'Ukuba Undibeke Phantsi, 'wamkela umthandi onxaxhileyo' kwindlela awele ngayo uSomandla. ' Ziingoma ezomeleleyo, imizekelo eyomeleleyo yokubhalwa kwengoma yelizwe, kodwa ababethi ngamandla afanayo neengoma ezizezabo apha. Intomba yeyona nto ilungileyo xa ingumntu wokuqala, xa amaxabiso egoba ilizwe ukuba alingane nelakhe ibali kunokuba azigoqe ukuze alingane nale fomu. Unengcambu enzima kwiXabiso lokuphumelela kula madabi, nanjengoko unokufumana unqwenela njalo Intombi yoMfama waseMidwest ingadlula i-hype.
daft punk umsebenzi wasekhaya zip
bakubeka njengomlawuli omnyama
umculo omtsha we-2015
Umda wesixeko sase-austin umda we-2017